China Steel Metal Structure Ihe Bonding rụpụta na Factory | Akwa Ugbo
Polyurethane nyagide maka ígwè metal Ọdịdị ihe bonding
Koodu: usoro SY8422
Ntọala siri ike 100: 40
Sizing usoro: ịgba ọkụ na ịpị
Mbukota: 150KG / ígwè drum
The mpụga mgbidi nghọta osisi maka ígwè Ọdịdị ụlọ ihe onwunwe bụ a ọtụtụ ihe mejupụtara, tumadi ekewet nke akụkụ atọ, elu bụ a mkpuchi metal efere, n'etiti oyi akwa bụ a polyurethane ụfụfụ mkpuchi oyi akwa, na ala elu bụ aluminum foil echebe oyi akwa. Ọnụ ego ahụ dị elu, ihe ndị a chọrọ maka ihe ndị na-ekekọta ihe polyurethane gluu akara aka dịkwa elu. E nwere nnukwu-ike, ihu igwe na-eguzogide ihu igwe polyurethane nke nwere ike izute ihe ndị dị elu nke ihe ọkụ ọkụ maka nhazi ụlọ eji arụ ọrụ. Colorlọ a na-agba agba ígwè nwere uru nke ịdị arọ, ike dị elu, nchekwa okpomọkụ na mkpuchi ọkụ, mara mma ma na-adịgide adịgide, wdg. Ọ bụ ụlọ dị elu nke na-ejikọta ihe owuwu na ịchọ mma, na ngwa ngwa ịwụnye. Thelọ a na-acha uhie uhie na-acha ọcha dị ọcha na-ewu ya ma na-ejikwa ya na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, obodo nta, mgbakwunye ụlọ, ụlọ imecha ikuku, nchekwa oyi, ụlọ ahịa, kiosks na ụlọ ndị na-adịru nwa oge. Igwe ọkụ a na-acha nchara ọkụ na-acha uhie uhie nke ihe ruru mita 14KG na-erughị 14KG nwere ike belata oke nhazi ahụ ma belata ọnụ ahịa nke ụlọ mkpanaka.
ígwè Ọdịdị ígwè
metal mpempe akwụkwọ dị ka na agba ígwè efere
fireproof isi ihe ndị dị otú ahụ dị ka nkume ajị na iko ajị
Agba nchara efere bụ ngwaahịa nke efere igwe na-eme ka oyi na-acha na galvanized ígwè, mgbe ọgwụgwọ kemịkalụ n'elu, mkpuchi (mkpuchi mpịakọta) ma ọ bụ ihe nkiri vidio mejupụtara (ihe nkiri PVC, wdg), wee ghee mmiri na ịgwọ ọrịa. Fọdụ ndị mmadụ na-akpọ ngwaahịa a "ihe eji agba igwe agba agba" na "plastic color steel plate". A na-emepụta ngwaahịa ndị na-acha agba agba site na ndị na-emepụta ihe na mpịakọta na usoro mmepụta na-aga n'ihu, ya mere a na-akpọkwa ha ihe mkpuchi igwe. Igwe igwe nchara agba ọ bụghị naanị na enwere ike nke igwe dị elu ma mekwaa ngwa ngwa nke ihe igwe, mana yana ọmarịcha mma na mmebi mmebi nke ihe mkpuchi. Efere nchara agba bụ ihe na-asọpụrụ n'ụwa taa. Site na mmụba nke sayensị na teknụzụ, mmụba nke mmata gburugburu ebe obibi, na mmelite nke ibi ndụ ndị mmadụ, ụlọ ndị na-agagharị agagharị na-egosiwanye ike ha na atụmanya ahịa sara mbara. Ha na-ewu ewu na ihe owuwu, ngwa ụlọ, electromechanical, njem, mma ime, yana ngwa ọrụ ọfịs. Na ihu ọma nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ezigbo ọgwụgwọ ngwa ngwa
≥60 Celsius C na-agbanye ọkụ maka nkeji 5-7 iji gwọọ ngwa ngwa. Ngwaahịa a nwere ike belata ọrụ, zere ịdị na-emezighị emezi nke ndị ọrụ, yana ọhụụ nke oghere na-emeghe na ntopute nke ego gluu na-enweghị isi na-eweta, ma hụ na ọkwa dị mma nke efere ndị ahịa.
Nnukwu nhazi usoro
Enwere ike iji mmepụta oge na usoro mkpuchi ịgba (a ga-akwụsị usoro mkpuchi ịgba maka nkeji 1-2, na egbe ịgba anaghị egbochi isi egbe).
Kwesịrị ekwesị maka ákwà mgbochi
mkpuchi na spraying
O adabara ọkara akpaka na n'ụzọ zuru ezu akpaka akara mmepụta na n'ichepụta, mma mmepụta arụmọrụ, na nwere magburu onwe ịsa ahụ na spraying mmetụta.
DP na-agbanye ọkụ
Teknụzụ dị egwu na-etinye DP na isi ihe na-emepụta polyurethane gluu. Nke ahụ bụ, DP agbakwunyere na isi ụlọ ọrụ. Mgbe okpomọkụ dị elu, DP na isi ihe na-akpata ịgbasa ngwa ngwa, na ọgwụgwọ na njikọta njikọ nke isi ihe na MDI polymerized na-akwalite, na njikọta nwere ike ịgwọta na 5 nkeji.
Osote: Interiorchọ Mma Ime Obodo Rail